Kwethulwe inqubomgomo ngemali yomhlaba – Ubukhosi
Home/ Ubukhosi noMhlaba/Kwethulwe inqubomgomo ngemali yomhlaba
Kwethulwe inqubomgomo ngemali yomhlaba
Ubukhosi News November 19, 2015
Ingxenye yaMakhosi abahambele umhlangano
IBHODI ye-Ingonyama Trust ebhekelele umhlaba waso KwaZulu-Natal yethule inqubomgomo yokwabiwa kwemalinzuzo etholwe ngomhlaba oqashwe ngaMakhosi oqashiselwe abamabhizinisi.
Lokhu kuqinisekisa izindaba zamatrust ngenhloso yokuthuthukisa imiphakathi yasemakhaya eyakhele izindawo zaMakhosi. Lolu hlelo kwethulelwe amaKhosi ezizwe emhlanganweni obubanjelwe eThekwini. Inqubomgomo izolandelwa uma aMakhosi efaka izicelo zokuthola lezi zimali eHhovisi le-Ingonyama Trust Board (ITB).
Okunye okudingidiwe kulo mhlangano kubalwa uhlelo lweSilo lokuvulela abantu baso basemakhaya amathuba okuhweba ngemisebenzi yabo yezandla ozodayiselwa abamazwe aphesheya, kanye nokunikezela ngogandaganda bokulima ezindaweni zasemakhaya.
USekelasihlalo we-ITB, uMehluleli uJerome Ngwenya ubikele aMakhosi ukuthi njengoba ITB yasungulwa ngokulandela umthetho iKwaZulu-Natal Ingonyama Ammendment Act 9 1997 ukuba iphathe umhlaba owenganyelwe i-ITB.
“IBhodi lisiza imiphakathi ukuba isungule izinhlaka zokuthuthukisa imiphakathi ngokuxhumana nale mikhandlu yaMakhosi ukuze yonke impahla ethengelwa umphakathi igcinwe ohlwini oluhlukile kulolo olugcina impahla kaHulumeni.’’ kusho uMehluleli uNgwenya ophinde wakuphawula ukuthi njengoba izindawo ezenganyelwe i-ITB zingafani ngokwentuthuko lokho kusho ukuthi nemali eziyifakayo ayifani.
“Imiphakathi enomnotho wezimbiwa phansi kanye nokunye kuba lula kuyona ukukhulisa umnotho ngaleyo ndlela bese imali eqhamuka kule miphakathi iba ningana kuneminye imiphakathi.’’ kusho uMahluleli uNgwenya obe esebeka imigomo ezolandelwa uma sekwabiwa izimali yiHhovisi le-ITB.
“Amaphesenti angama-75 yemali emva kokukhishwa kwezindleko iyobhekiswa emkhandlwini wesizwe kanye nomphakathi. Le mali iyosiza futhi ukuthi iBhodi libhekane nezinye izidingo eziqondene nezindleko zalowo mhlaba njengamaproperty rates uma isinqumo sesithathiwe ngalolu daba kanye nezinye izidingo eziqondene nomsebenzi womhlaba uma ibhodi lingabelwe imali eqondene nalowo msebenzi nguMnyango WezeZimali. Amaphesenti alishumi ayonikezwa iNkosi yesizwe ukubhekana nezidingo zayo njengenkosi. Bese amaphesenti ayisihlanu anikezwa umnini mhlaba (trustee) njengokulawula komthetho. Le mali iyosiza futhi ukwelekelela nakulezo zizwe noma imiphakathi entula kakhulu,’’ kuchaza uMuhluleli uNgwenya.
UMehluleli uphinde wathi uhlaka lomphakathi olubizwa ngeCommunity Development Trust olwakhiwa imikhandlu yaMakhosi yilo oluyokwemukela izimali okukanye izinzuzo eziqondiswe emphakathini etholakale ngokusentshenziswa komhlaba.
Odabeni lwamathuba omsebenzi wezandla okumele uyodayiswa ezweni laseLouisiana olubizwa ngeLouisiana Project, isikhulu esengamele ibhodi uDkt uFikisiwe Madlopha wethulele aMakhosi ukuthi iConsul yaseLouisiana yaxhumana neSILO izokwethula lolu hlelo lokudayiselana ngale misebenzi yezandla okubalwa kuyo ubuhlalu, imvunulo yesintu nokunye. “Inhloso yalolu hlelo ukulwisana nobubha emakhaya,’’ kuqhuba uDkt uMadlopha.
UDkt uMadlopha uphinde wakuveza ukuthi i-ITB ithola ukuthi imisebenzi eminingi yomphakathi yezandla esingethwe yizinduna namakhosi isikhathi esiningi ayifinyeleli ezimakethe.
“Inhloso ye-ITB ukusebenzisana nezinhlaka zemikhandlu yaMakhosi kunokusebenzisana neMinyango kaHulumeni. Kunanamakhompiyutha azonikelezwa aMakhosi.”
UDkt Madlopha ubikele aMakhosi ukuthi isikhathi esibekelwe ukuba kuthunyelwe umsebenzi wokuqala wezandla kungenyanga ezayo kanye noMasingana.
Ohlelweni lwezolimo olubizwa nge-100 hectres, uNkk uDorcas Zondi osebenza eBhodini uthe iHhovisi le-ITB lizohlinzeka aMakhosi ngogandaganda abayishumi abazolekelela imiphakathi yawo ekulimeni. Wagcizelela ngokuthi: “Labo gandaganda kuzomele basentshenziswe babuye babuyiselwe emuva.’’
Sekuya ngamagama enkehli kweleNgonyama Trust noHulumeni
Ibhixene esizweni sakwaMathenjwa